Mandiil dushooda waa nooc ka mid ah qalabka dayrka ammaanka casriga ah been mandiil afaysan-daab steel iyo-siligga sare silig. Mandiil dushooda iyo silig lagu rakibi karo si loo gaaro natiijada cabsi leh iyo joojinta u ifbaxay wareega dagaal badan, la ilaashado nabadda iyo jarida oMarna Jaha sare ee derbiga, ayaa sidoo kale ka naqshado gaarka ah samaynta fuulitaanka iyo taabashada aad u adag. The silig iyo strip waxaa galvanized si looga hortago in ragaasi. Currently, mandiil dushooda iyo silig ayaa widel ...
FOB Price: US $ 500 - 1200 / Ton
Min.Order Tirada: 100 ton Ton / metrik ton
Supply Kartida: 30 ton Ton / metrik ton per Day
Mandiil dushooda waa nooc ka mid ah qalabka dayrka ammaanka casriga ah been mandiil afaysan-daab steel iyo-siligga sare silig. Mandiil dushooda iyo silig lagu rakibi karo si loo gaaro natiijada cabsi leh iyo joojinta u ifbaxay wareega dagaal badan, la ilaashado nabadda iyo jarida oMarna Jaha sare ee derbiga, ayaa sidoo kale ka naqshado gaarka ah samaynta fuulitaanka iyo taabashada aad u adag. The silig iyo strip waxaa galvanized si looga hortago in ragaasi.
Currently, mandiil dushooda iyo silig ayaa si weyn u isticmaala wadamo badan oo duurka military, xabsiyada, guryaha lagu hayo, dhismayaasha dawladda iyo xarumaha kale ee ammaanka qaranka. Recently sano, cajalad hotooyin ayaa sida muuqata noqon silig dayrka heer sare ugu caansan ee codsiyada ma aha oo kaliya ammaanka military iyo qaran, laakiin sidoo kale aqalada iyo xaydaanka bulshada, iyo dhismayaasha kale ee gaarka loo leeyahay.
Mandiil Blades faahfaahinta
Tape hotooyin Concertina (CBT), samayun Tape hotooyin (BTO)
qalabka Standard waxaa ka mid ah galvanized ama ahama.
Hababka Standard alaabta waxaa lagu muujiyey in miisaska kor ku xusan, caddaymaha gaar ah waxaa laga heli karaa codsi.
Tape dushooda iyo faahfaahinta Wire
Loop Ballaca ka baxsan
Length Standard per gariiradda
Notes: Hababka waxyaabaha Standard waxaa lagu muujiyey in miisaska kor ku xusan, caddaymaha gaar ah waxaa laga heli karaa codsi. Qalabka Standard waxaa ka mid ah galvanized ama ahama.
Waxa intaa dheer in waxyaabahaan, waxaan sidoo kale sameeyo mashiinada oo iyaga ka soo saaraan.
Previous: Staninless Steel mandiil dushooda iyo Wire
Next: Wire hotooyin
Qaloocin dushooda iyo Wire
Korontada galvanized welded Wire mesh